ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားကစားသမား တဖြစ်လဲ Idol များ - PX
Idol အချို့ဟာသူတို့ရဲ့အားကစားသမားဘဝမှ kpop idol အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Idols အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက ၅ဦးကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. X1 ‘s Seungyoun
1 အဖွဲ့ရဲ့ memeber တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Seungyounဟာ ဘောလုံးအားကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာခြောက်တန်းအရွယ်မှာစတင်ကစားခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သော skilllကြောင့် ဘရာဇီး နိုင်ငံမှာ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာ ”S.C. Corinthians Paulista” club ရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။X1အဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့်ဘရာဇီးမီဒီယာများမှာဖော်ပြခြင်းကိုခံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။Seungyoun ဟာတိုက်စစ်မှူးအဖြစ်၂နှစ်ကစားခဲ့ပါတယ်။
2. SEVENTEEN ‘s Hoshi
Seventeen အဖွဲ့ရဲ့ Hoshiဟာသူရဲ့တက်ကြွတဲ့ ကကွက်များနဲ့ talent ရှိခြင်းကိုငြင်းလို့မရပါဘူး။Hoshiဟာတိုက်ကွမ်ဒိုကစားခြင်းကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးခါးပတ်အနက်ရောင်အဆင့်ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ထူးချွန်မှုကြောင်းလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွှေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
ITZYအဖွဲ့ရဲ့visualဖြစ်တဲ့Yunaဟာအားကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ floorballကစားသမားအဖြစ် ၄နှစ်အထိကစားခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားဘဝမှာသူမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်နာမည်ကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။Yunaဟာနိုင်ငံအဆင်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီးသူမရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
X1အဖွဲ့ရဲ့KimYohanဟာလည်းprofessionalတိုက်ကွမ်ဒိုကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ခွန်းအားကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ်များရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကိုအထူးခံခဲ့ရပါတယ်။ Yohanရဲ့အဖေဟာလည်း၁၃နှစ်ထိကစားခဲ့ဖူးပြီးအမွေနှစ်ကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာလူငယ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲများမှာနှစ်ကြိမ်အထိဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
BTS အဖွဲ့ရဲ့Sugaဟာဆိုရင်လည်းသူရဲ့ပျင်းရိတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ သိခဲ့ဖူးကြပေမဲ့လည်းအားကစားသမားပုံစံကိုလည်းပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ Rapperတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့Sugaဟာ Basketball ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူဟာ stage name ဖြစ်တဲ့ Suga နာမည်ကို အကြံရခဲ့တာလည်း အရင်ကစားခဲ့စဉ်က Shooting Guard postion ကို စဥ်းစားရင်း အတွေးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။